Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Arsenal oo ku jees jeesay Alexis Sánchez – Gool FM
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Arsenal oo ku jees jeesay Alexis Sánchez
Dajiye December 5, 2018
(Premier League) 05 Dis 2018. Halyayga reer France iyo kooxda Arsenal Emmanuel Petit ayaa ku jees jeesay kahor kulanka caawa ka dhici doono garoonka Old Trafford weeraryahanka Manchester United ee Alexis Sanchez.
“Haa, Sanchez waxa uu doonayay inuu ka tago Arsenal, wuxuu door biday mushaarka qaaliga ah ay u soo bandhigtay kooxda Manchester United”.
“Alexis Sanchez haatan wuxuu qaadanayaa mushaar ka badan inta uu ku qaadan jiray kooxda Arsenal, laakiin muxuu ka sameeyay 9 bilood kubada cagta? Dhabcan waxba ma uusan ka qabanin”.
“Xaqiiqdii ma aanan arkin Sanchez tan iyo markii uu ku biiray kooxda Manchester United”.
Si kastaba indhaha jamaahiirta kubada cagta ee aduunka ayaa waxay ku sii jeedaan kulanka caawa ka dhici doona garoonka Old Trafford, kadib marka ay kooxda Manchester United ku soo dhaweyso Arsenal si ay u wada ciyaaraan mid ka mid ah kulamada 15-aad ee horyalka Premier League.
RASMI: Saacadda, Goobta iyo Goorta la ciyaarayo Finalka Supercoppa Italiana ee Juventus vs Milan oo la shaaciyay
“Laguma difaaci karo Neymar Jr waaxa uu sameenayo” - Pele